December 2017 - Page 6 of 6 - Puntland Mirror Believable Media Website
Garowe-(Puntland Mirror) Puntand Finance Minister has presented 2018 budget to parliament on Monday. The 2018 Budget is estimated at $ 92,713, 364, Finance Minister Abdullahi Saeed Arshe said a fund expected from UN agencies was […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Wasiirka Maaliyada Puntland ayaa manta oo isniin ah baarlamaanka horgeeyay miisaaniyada sanadka 2018 ee Puntland. Miisaaniyada sanadka 2018 ayaa lagu qiyaasayaa $92,713, 364, Wasiirka Maaliyada Cabdullaahi Siciid Caarshe ayaa sheegay in miisaaniyada laga […]
December 3, 2017 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Konton iyo afar maleeshiyo Al-Shabaab ah ayaa dowladda Soomaaliya isku soo dhiibay tan iyo qaraxii Muqdisho ee bishii lasoo dhaafay, sida uu sheegay wasiir dowladda katirsan. Wasiirka Amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow ayaa […]
December 2, 2017 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Taliyaha ciidamada booliiska magaalada Garoowe ayaa digniin u diray dhalinyarada falalka amni darada ah magaalada gudaheeda ka sameeya. Kornayl Maxamuud Muuse Bile oo oo loo yaqaan Fardafuul oo shir jaraaid ku qabtay maanta […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa manta oo Sabti ah tagay magaalada Muqdisho. Kahor inta uusan ka dhoofin Garoowe, Madaxweynaha ayaa sheegay in uu Muqdisho uga qeybgalayo shir ku saabsan amniga qaranka iyo […]
December 1, 2017 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa manta oo Jimce ah dib ugu soo noqday caasimada Puntland ee Garoowe kadib dhowr maalmood oo uu safar shaqo ku joogay magaalada Addis Ababa ee dalka […]